Ihe mgbagwoju anya nke njirimara na njikwa data ndi ahia | Martech Zone
Ọnọdụ Nsogbu Ndị Azụmaahịa
Na akụkọ ifo ndị Hindu, Ravana, nnukwu onye ọkà mmụta, na eze ndị mmụọ ọjọọ, nwere isi iri, nke gosipụtara ike na ihe ọmụma ya dị iche iche. Isi enweghị ike ibibi ya na ikike ịghaghachi. Na agha ha, Rama, chi agha, ga - eserịrị n'okpuru isi Ravana wee tụọrọ akụ na obi dị naanị ya ka ọ gbuo ya maka ezi ihe.
N'oge a, onye na-azụ ahịa dị ka Ravana, ọ bụghị n'ihe gbasara atụmatụ ọjọọ ya kama ọ bụ ọtụtụ njirimara ya. Nnyocha na-ekwu na onye na-azụ ahịa na US taa jikọtara na ngwaọrụ 3.64 Site na mmụba nke ọtụtụ ngwaọrụ ọhụụ dị ka ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi, ndị na-eyi uwe, ụlọ ndị ejikọtara, na ụgbọala, wdg, a na-eme atụmatụ na ọ nwere ike jikọọ na ihe dị ka ngwaọrụ 20 na ọ bụghị n'ọdịnihu dị anya. Dị ka ọ mere maka Rama, nke a bụ ihe ịma aka doro anya maka onye na-ere ahịa taa - otu esi agagharị site na ntanetị nke ngwaọrụ ndị a iji mata ma mata ndị ahịa ka o wee nwee ike ịdị na-arụ ọrụ, na-aga n'ihu, ma na-arụ ọrụ na gburugburu ebe ọ na-ekwu okwu.
Nchọpụta ụlọ ọrụ na-atụ aro na ọ bụ naanị ntakịrị pere mpe nke azụmaahịa ndị ahịa nwere ike ịmata ndị na-ege ha ntị ugbu a n'ụzọ ziri ezi - yabụ ọbịbịa na ịrị elu ngwa ngwa nke njikwa njikwa njirimara nke na-enyere azụmaahịa aka dozie njirimara nke ndị na-ege ha ntị na njirimara na profaịlụ ndị ahịa ọ bụla. Ogo nke ahịa amata amata na-eto site na $ 900 Mn ugbu a karịa ihe karịrị $ 2.6 Bn site na 2022, na-agafe ọganihu ntinye ego ahịa niile.
A na-adịbeghị anya Nnyocha nyocha Winterberry na-egosi na ihe dịka 50% nke azụmaahịa ndị ahịa na-emewanye elekwasị anya ma na-ezube ịbawanye itinye ego na azịza amata. Ọ bụ ezie na nkewa na ichebe na mgbasa ozi akwụ ụgwọ ka bụ ihe eji eme ihe maka ndị na-azụ ahịa, a na-atụ anya ka obe na ngwaọrụ nke onwe ya yana mmesho na njirimara ga-abụ ebe elebara anya n'ọdịnihu dị nso.
Identity Solutions: Gara aga, ugbu a na ọdịnihu
Na isi ya, ọrụ mkpebi amata ọrụ bụ ịchịkọta data ọrụ ndị na-ege ntị site na otu ụzọ dị iche iche nke data, nyiwe, na ọrụ iji nweta njikọta, njirimara ọwa na njirimara nke onye ọ bụla na-ege ntị. Agbanyeghị, usoro a abanyela n'ụzọ dị ukwuu ugbu a site na ọwa ahịa azụmaahịa akọwapụtara njirimara na atụmatụ dị iche iche. CRM ọdụ data dị ka ndị nlekọta nke ndị ahịa nke mbụ na ozi kọntaktị abụrụla ihe ntanetị bụ isi maka ịmegharị ahịa ahịa, ọkachasị na email ma ọ bụ ozi ziri ezi.
Site na uto nke ahia dijitalụ na-emefu, Nhazi usoro data (DMPs) na-echekwa data omume omume ndị na-ege ntị dijitalụ iji kwado nkwado ngosi mgbasa ozi ịzụ ahịa abatala ama. Agbanyeghị, mkpa ha dị ugbu a na ogige ndị nwere mgbidi dịka Facebook na Google na-emechi ha. Channelzọ ọzọ na-eto eto nke mmetụta bụ nyiwe data mkpanaka iji kwado ngwaọrụ mkpanaka & njikọ aka dabere na ọnọdụ.
Iji merie njedebe nke njikọ, nke ọtụtụ ọwa na ihe nchoputa nke ugbu a dị ka ọdụ data CRM ma ọ bụ DMP na-egbochi, isi ihe na-agbanwe ka ọ pụta ihe ngwọta nke oge a Ngwa data ndị ahịa (CDPs) na njirimara eserese. Ndị a na-enye otu njikọta, cross-touchpoint na omni-channel obula n'ebe mkpebi amata na njikọta, na-eme ka nkwekọrịta zuru oke, otu echiche nke ndị ahịa na ahịa.
Ọgụgụ m. Njikwa njirimara ndị ahịa bụ isi ihe na ahịa ahịa
Mkpebi nke Mkpebi Njirimara
Nchịkọta njirimara nke njirimara bụ isi bụ ịnakọta data metụtara ndị na-ege ntị site n'ọtụtụ ụzọ wee tinye ya site na usoro na-aga n'ihu nke na-edozi, na-emelite ma melite data a n'ime profaịlụ ndị ahịa pụrụ iche, nke azụmaahịa na-eji maka ụdị ahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ.
Usoro ahụ nwere usoro usoro 3:
Njikwa data - Gụnyere ingestion nke data disparate nke ndị ahịa data, ma njirimara, yana ọrụ metụtara ya, yana nhazi na nchekwa data a n'ime ebe nchekwa ahaziri.
Mkpebi njirimara - Nke a bụ ihe dị oke mkpa ma dị mgbagwoju anya nke usoro mkpebi na nke puru omume nke na-enye ndị na-achọpụta ihe, na-adakọ, na-atụgharị ederede, yana na-ejikọ na njirimara ndị ahịa pụrụ iche yana usoro nkwado iji bulie izi ezi nke usoro mkpebi ahụ.
Ọgbọ profaịlụ ndị ahịa - Nke a jikọtara njirimara, akparamaagwa, na omume niile na nkwekọ, njirimara zuru ezu nke ndị na-azụ ahịa, otu onye, ​​ma ọ bụ ezinụlọ.
Gịnị na-eme ka Nchọpụta Nchọpụta Njirimara Dị Irè: 5 Mantras
Gbaa mbọ hụ na ejiri njirimara sitere na usoro data dị ukwuu nweta usoro amata. Ọ bụghị naanị ọrụ ngwaọrụ kamakwa ngwa ndị dị n'azụ iji nyere aka ịkụgharị gafere ngwaọrụ, kuki ma ọ bụ pixel ma kpughee ndị mmadụ n'ezie n'azụ ha na omume ha.
Dịka akụkụ nke njikwa data, hụ na ị zutere ikike ikike nke ndị ahịa na nnabata nke usoro iwu ụlọ ọrụ dịka GDPR, CCPA wdg.
Nchọpụta njirimara kwesịrị ịgụnye usoro egwuregwu dabara adaba, nke na-achịkwa nke na-achịkwa iji hụ na ọ dị oke oke mkpa iji kwado okwu metụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na itinye aka na ahịa ahịa.
A ga-agbakwunye usoro mkpebi ahụ site na iji igwe na-amụ ihe na-arụ ọrụ iji gbasaa data ahụ, wee zute ihe achọrọ iji ihe eji eme ihe dịka mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-atụ anya ụgbụ buru ibu mana obere 1: 1
Nkọwapụta nke onye na-azụ ahịa, n'ụdị eserese njirimara, mgbe ị nwere ezigbo mkpa na oge, kwesịrị ịgafe njikọ njikọta na njirimara na njirimara site na itinye nghọta ndị achọrọ iji mee ka ịmalite ịmalite iji ahịa rụọ ọrụ.
Tags: ccpacdpnjikwa njirimara ndị ahịaNgwa data ndị ahịanjikwa mmekọrịta ndị ahịanhazi usoro njikwa datanhazi usoro nhazi datadmpecommerceemailid emailNchịkwanjirimaraIhe eserese njirimaramkpebi njirimaranjirimara njirimaraiguzosi ike n'ihemobile ngwakeonwenọmba ekwentịebe ire ereSMS